Musharax Jibriil oo kasoo horjeestay muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo - Awdinle Online
Musharax Jibriil oo kasoo horjeestay muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo
Musharax Madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa si kulul uga hadlay Go’aankii shalay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee muddo xileedkoodu dhammaaday ay muddo kordhinta ugu sameeyeen hay’addaha dowladda iyo Madaxweyne Farmaajo.
Qoraal uu soo saaray Musharax Jibriil Ibraahim ayaa siweyn uga soo horjeestay Go’aankii ay qaateen Xildhibaanada ee labada sanno loogu kordhiyay dowladda, isagoona sharci darro ku tilmaamay tallaabadaas.
Musharaxa ayaa sheegay in Go’aanka uu ahaa mid si toos uga horimaanaya heshiisyadii siyaasadeed ee lagu doonayay in xal buux looga gaaro khilaaf hareeyay iyo caqabadaha hor taagan qabsoomida doorashooyinka dalka ka dhacaya.
Madaxda dowladda ee muddo xileedkoodu dhammaaday ayuu Musharax Jibriil Ibraahim ugu baaqay inay ka fogaadan wax kasta oo keeni kara dhaawac soo gaara dowladnimada Soomaaliya iyo Dastuurka KMG ah ee u yaala dalka.
Sidoo kale Musharaxa ayaa Madaxda dowladda kula taliyey inay dib ugu laabatan miiska wada-hadalka, si heshiis buuxa looga gaaro khilaafka ka taagan doorashada, iyada oo la raacayo heshiiskii 17-kii Sep lagu gaaray Muqdisho.
Ugu dambeyn Musharax Madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay meel kasta oo ay joogaan inay ka fogaadan talaaba kasta oo keeni karta burbur ku yimaada dalka iyo dowladnimada Soomaaliya.
Hoos ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Next articleSaciid Deni iyo Axmed Madoobe oo ka tegay Muqdisho